Aung Naing Moe, Author at BIM Trainings
ကျွန်တော်တို့ Network အကြောင်း စလေ့လာတော့ 1.unicast 2.multicast 3.Broadcast 4.anycast ဆိုပြီး လေ့လာကြရပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ CCNA , CCNP level လောက်ထိ unicast တို့၊ broadcast တို့အကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြ၊ ဆွေးနွေးကြပေမယ့်၊ Multicast ကတော့ အမေ့ခံဘ၀နဲ့ ကျန်နေခဲ့ပါ တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Multicast application တွေကို အသုံးပြုတဲ့ environment နဲ့ဝေးကွာနေခြင်း၊ Network ပညာရပ်ကို လေ့လာတဲ့အခါ အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး မလေ့လာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ multicast application တွေ မသုံးတဲ့အတွက် multicast အတွက် အာရုံစိုက်စရာမလိုတော့ မလေ့လာ ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အသုံးမပြုသည့်တိုင်အောင် အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်မနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ […]
ကျွန်တော်တို့ routing and switching လေ့လာစဉ်က Catalyst IOS switching အကြောင်း လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ Data Center ဘက်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း Data Center topic တွေထဲက အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nexus Switching အကြောင်း လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Catalyst IOS နဲ့ Nexus ဘာတွေကွာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီသလောက် ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ တကယ်တော့ Catalyst IOS နဲ့ Nexus Feature တွေ တော်တော်များက တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် CCNA , CCNP , CCIE routing Switching ကိုလေ့လာထားတဲ့သူတွေက ပိုမိုပြီး လွယ်ကူစွာနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာတွေတူလဲဆိုတော့- VLAN Trunking VTP […]
OSPF Network Type OSPF Network type တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF network type တွေဟာ အသုံးပြုနေတဲ့ media device ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းလဲ ရှိပါတယ်။ ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ- အသုံးပြုနေတဲ့ media က Ethernet လား၊ Frame Relay လား၊ PPP လား စတဲ့ media ပေါ်မူတည်ပြီး OSPF network type တွေ ကွဲသွားပါတယ်။ OSPF Network type ကွဲသွားတာနဲ့အမျှ- Hello message ပို့တဲ့ပုံစံ ၊ update ပို့တဲ့ပုံစံ ကွဲသွားပါတယ်။ ဘယ် router က neighbor adjacency […]
OSPF – Part4(LSA Types)
Backbone router, internal router စသဖြင့် Router type တွေကွဲသွားသလို၊ အဲဒီ router တွေက ပို့လွှတ်တဲ့ LSA type တွေလည်း ကွဲသွားပါတယ်။ ဥပမာ- ABR ဆိုရင် ဘယ်လို LSA တွေလွှတ်တယ်။ ASBR ဆိုရင် ဘယ် လို LSA တွေဆိုတယ်ပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။ LSA Type 1 , type2စသဖြင့် ကွဲပြားသွားတဲ့ LSA အကြောင်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF run နေတဲ့ router တစ်လုံးဟာ ဘယ်လို LSA တွေကို ပို့လွှတ်တယ်၊ ဘယ်လို LSA တွေ လက်ခံရတယ်ဆို တာ သူ့ရဲ့ […]
ကျွန်တော်နှင့် CCIE လမ်းကြောင်း (အောင်နိုင်မိုး, CCIE#50505) – Part 2
CCIE ဖြေခါနီးအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများ CCIE ဖြေတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျအောင် လုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ မင်းလား အောင်မှာ၊ အလကားပါကွာ စသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်မယ့်သူများနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ ကျွန်တော် အတွက် registration လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်း မလိုအပ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့မှ မပြောပဲ နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အဓိက အားပေးကြသူများကတော့ ဆရာ ကိုဇေယျာဖြိုး၊ ဆရာ ကိုစိုင်းဥာဏ်လင်းဆွေ၊ ကိုနေခန့်ဇော်၊ကျွန်တော့်ဇနီး Dr စန်းသီတာဝင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ CCIE ဖြေဖို့ သုံးရက်အလိုမှာ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူ စင်ကာပူကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၇ရက်နေ့စာမေးပွဲဖြေပြိး၊ ၈ ရက်နေ့မှာ စင်ကာပူမှာ မိန်းမနဲ့လျှောက်လည်မယ်ပေါ့။ အကယ်၍ ၇ရက်နေ့အောင်ခဲ့ရင် ၈ရက်နေ့သည် ပျော်ရွှင်စရာနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျခဲ့ရင်တော့လည်း ဆိုပြီး အဆိုးဘက်ကနေပြင်ထားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ဆရာတွေကတော့ ကျတော့လည်း နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့။ […]
ကျွန်တော်နှင့် CCIE လမ်းကြောင်း (အောင်နိုင်မိုး, CCIE#50505) – Part 1
Network Engineer လုပ်ဖို့ လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတော်တော်များကို CCIE ဖြစ်ချင်လား မေးကြည့်တဲ့အခါ CCIE ဖြစ်ချင်တဲ့ သူကသာ များပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း CCIE ဖြစ်ချင်လားဆိုရင် ဖြစ်ချင်တယ် လို့ပဲ ဖြေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် CCIE ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခု။ ကျွန်တော့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု လို့ပဲ မြင်ခဲ့ပြီး အိမ်မက်အဖြစ်လည်း မမက်ရဲခဲ့သလို၊ စိတ်ကူးအဖြစ်တောင် မယဉ်ရဲခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့် CCIE ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေရတာလဲ? ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိဖြစ်နေသူတစ်ယောက်အတွက် ဒီလိုတွေးတာ မဆန်းပါ ဘူး။ ကျွန်တော်ဝန်းကျင်မှာ CCIE တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ Cisco က သင်တန်းတွေ သွားတက်တဲ့အခါ Cisco က CCIE တွေနဲ့ […]
OSPF – Part2(OSPF ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?)
Read OSPF – Part 1 (Overview) here အဆင့်တစ်- OSPF neighbor ကိုရှာပါတယ်။ ပြီးရင် topology information တွေကို အချင်းချင်း ဖလှယ်ကြပါတယ်။ သူသိတဲ့ topology information တွေ ကိုယ့်ပေး၊ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်သိတဲ့ topology information တွေ သူ့ကို ပြန်ပေး စတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ အဆင့်နှစ်- SPF ကနေတစ်ဆင့် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ အဆင့်သုံး- Neighbor နဲ့ Topology Table Information တွေကို maintenance လုပ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်သုံးဆင့်ကို နည်းနည်းချဲ့ပြီး လေ့လာကြည့်ရအောင်- အဆင့်တစ် – Neighbor & Topology Discovery OSPF run နေတဲ့ router တစ်လုံးကို […]
OSPF – Part 1 (Overview)
Routing protocol တွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ Static Routing Protocol, Dynamic Routing Protocol ဆိုပြီး အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်။ Dynamic Routing Protocol မှာလည်း IGP နဲ့ EGP ဆိုပြီး ထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ Interior Routing Protocol (IGP) တွေကတော့ EIGRP, OSPF, IS-IS, RIP တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Exterior Routing Protocol (EGP) ကတော့ BGP တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Blog Post မှာတော့ OSPF ဆိုတာဘာလဲ? OSPF ကိုဘာကြောင့်သုံးရသလဲ? OSPF ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? စတာတွေကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF ဆိုတာဘာလဲ? OSPF ဆိုတာ standard [...]
How To Use Multi homed ISP for Load Balancing
ဤတစ်ပတ်အတွက် အရူးလွယ်အိတ်မှ ထွက်ကျလာသော မှတ်စုမှာ How To Use Multi Homed ISP For Load Balancing ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆရာရအလွန်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ဆရာဂုရုအားလုံးတို့သည် ကျွန်ုပ်အား စေတနာ မေတ္တာအပြည့်ဖြင့် ပညာသင်ကြားပေးရုံသာမက အနှစ်သာရရှိသော သြ၀ါဒများကိုပါ မ်ိန့်ချွေလေ့ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဂုရုတစ်ယောက် ဆုံးမသည်မှာ- “IT ပညာကိုလေ့လာတဲ့အခါ နည်းပညာကို စနစ်တကျလေ့လာပါ။ configuration ချည်းသက်သက်မလေ့လာပါနဲ့။ Firewall ဘယ်လို configuration လုပ်ရသလဲဆိုတာထက် Firewall ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ သိဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။ Router ဘယ်လို အလုပ် လုပ်သလဲမသိဘဲ Router configuration လုပ်ပုံပဲ လေ့လာခဲ့ရင်၊ ရေရှည်မှာ ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်” ဆိုပြီး သြ၀ါဒချွေပါတယ်။ [...]
ထိုထိုဤဤ အလီလီသော က၀ိ ဆရာ အဆူဆူတို့ထံတွင် သင်ကြား လေ့လာမှတ်သားခဲ့ဖူးသမျှကို နားလည်သလို မှတ်စုထုတ်ထားခဲ့သော မှတ်စုများကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ငါးတန်းကျောင်းသားဘ၀က လေ့လာခဲ့ရသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်ရပါသေးသည်။ “ပညာကိုလိုသော် ပညာရှိကိုယှဉ် ရူးကျွန်မူ၍ကပ် သွပ်ကျွန်မူ၍ချောင်း” ဟူသော စာပိုဒ်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်သည်လည်း အလီလီသောက၀ိဆရာတို့ထံတွင် သူရူးပမာ ကျိုးနွံစွာ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သမျှကို အရူးလွယ်အိပ်ကဲ့သို့ မှတ်မိသမျှကို နားလည်သလို အကုန်ထည့်ခဲ့ပါသည်။ မှော်ဘီဆရာသိန်း၏ အရူးလွယ်အိတ်ကဲ့သို့ အနှစ်သာရ အပြည့်ဝပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုတော့ မမျှော်လင့်စေလိုပါ။ အရူးလွယ်အိတ်ထဲမှ အရူးမှတ်စုများသာ ဖြစ်သောကြောင့် အမှားကင်းမည်ဟုလည်း အာမမခံပါ။ သို့သော် အမှားများ ပါခဲ့သော် ဆရာ့ဆရာတို့၏ အပြစ်မဟုတ် ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်သာဖြစ်ကြောင်း။ အမှားများတွေ့ခဲ့ပါက စေတနာထား ပြုပြင်ပေးမည့် ဆရာများကိုလည်း ရိုကျိုးစွာ လိုက်နာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း။ [...]